Kuboshwe abasolelwa ukugqekeza | News24
Kuboshwe abasolelwa ukugqekeza
AMAPHOYISA abophe abasolwa ababili endaweni yaseShakaskraal ngoLwesibili oledlule, ngomhlaka 12 kuMasingana (January), ngenkathi betholakala nezibhamu ezingekho emthethweni, izinhlamvu kanye nempahla okusolwa ukuthi intshontshiwe.
Lokhu kuvele ngombiko othunyelwe okhulumela amphoyisa aKwaZulu-Natal, uMajor Thulani Zwane.
UMajor Zwane uthe abasolwa baboshwe ngoLwesibili ebusuku ngabo 9pm ngenkathi abaseshi base Umhlai, Umhlali K9, kanye namaphoyisa aKwaDukuza besebenzela eShakaskraal.
Uthe: “Amaphoyisa abelandela umkhondo wabantu abasolelwa ukugqekeza umuzi eBlythedale Beach, KwaDukuza, ngomhlaka 31 kuZibandlela [December],” kusho uMajor Zwane.
Uqhube wathi amaphoyisa athole izibhamu ezimbili, izinhlamvu kanye nempahla okusolwa ukuthi yantshontshwa ngesikhathi kugqekezwa kuwona lo muzi.
UMajor Zwane uthe: “Kuboshwe abasolwa ababili kanti oyedwa ubalekile ngenkathi amaphoyisa etheleka endlini abekade behlezi kuyona. Abasolwa babhekane namacala okutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni, izinhlamvu kanye nempahla okusolwa ukuthi intshontshiwe. Abasolwa bazovela enkantolo yeMantshi yase Umhlali ngaphambi kokuthi bedlulele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza,” kusho yena.
Uqhube wathi ngomhlaka 31 kuZibandlela isisulu sasihlezi kwaso eBlythedale Beach ngenkathi sihlaselwa abasolwa abathathu ababehlomile.
Uthe: “Isisulu sahlukunyezwa ngaphambi kokuthi abasolwa befune ukhiye wesisefo lapho okwakugcinwe izibhamu, imali kanye nobucwebe. Kwavulwa icala lokugqekeza emaphoyiseni aKwaDukuza,” kusho uMajor Zwane.
UKhomishana wamaphoyisa aKwaZulu-Natal, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni uthe uyancomeka umsebenzi owenziwe amaphoyisa.
Uthe: “Sibonga nomphakathi ngokuthi usilekelele ekutheni sikwazi ukulwa nobugebengu ngokuthi usinikeze ulwazi olubalulekile, olusisizayo ekutheni sibophe abasolelwa ubugebengu,” kusho u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni.